Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme gwara anyị na Egypt bụ mmepe obodo ndị Negro-Africa - Afrikhepri Fondation
Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme gwara anyị na Egypt bụ mmepeanya ndị Negro-Africa
min gụọ 3 min
Lya ndi isi ojii (Prọfesọ Cheikh Anta Diop na Obenga) meriri nnukwu mmeri na ogbako nke Cairo na 1974. Ma European Egiptology nọgidere na-agha ụgha. Lya ndị Grik na ndị Latins, ndị hụrụ anya banyere ndị Ijipt oge ochie, na-ekwusi ike mgbe niile na ndị Ijipt so na “agbụrụ” ojii. N'etiti ọtụtụ akaebe Greek na Latin, ka anyị hota nke Herodotus, Diodorus, Aristotle na Heliodorus:
Herodotus, onye anakpọ aha nna nke akụkọ ihe mere eme, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme Greek (480-425 BC), gara Ijipt. Ọ gwara anyị na ndị Ijipt oge ochie nwere anụ ojii (melakroes) na ntutu nwere frizzy (oulotrikhes) (Akwụkwọ II, 104).
Diodorus, dịkọrọ ndụ Greek ọkọ akụkọ ihe mere Caesar Augustus (63 14 BC JC-AD) na-agwa anyị na ọ bụ Ethiopia nke colonized Egypt (na n'Atens uche: na-amụba bi njupụta eduga na njem nke ugwu). (Historical Library, Book III, 3,1).
Aristotle, ọkà mmụta sayensị, bụ ọkà ihe ọmụma, onye nduzi nke Alexander Onye Ukwu (389-322 BC), na klas Ijipt na Etiopia oge ochie ndị nwere akpụkpọ "kwa nwa" (agan Melanes) (physiognomy, 6)
The Greek Heliodorus ede banyere Chariclea a ọcha girl, nke dị n'ihu Ijipt: "Ọzọ ọ welie anya, hụrụ ha ọchịchịrị odidi (The Ethiopic, tome1)
N'ihe odide ọ bụla edere ederede, ngwaa bụ "kem" nke sitere na okwu ojii pụtara "imezu, ibili, iji mezuo, ịkwụ ụgwọ iji mezuo, ije ozi kamakwa ka ọ bụrụ oji". Okwu okwu kemịcha pụtara "zuru ezu, zuru okè, ọrụ, ọrụ".
Osiris, bụ Chineke a ma ama n'Ijipt, gbara agba. Na Pyramid Texts na Book of the Dead, ọ na-akpọ "The Big Black". Ọ bụ site n'ebe ndịda nke Ijipt (nke bụ ikpe nke mbụ fero na unifier of Egypt, Pharaoh Narmer). Na ndị Ijipt na odide na chi nwanyị Isis na Hathor na Thot chi Apis, Min, Horus ruru eru ojii, aha ahụ bụ "Black ukwuu" a na-eji chi nwanyị na funerary odide nke ọtụtụ Ijipt eze (PepiI, PépiII, Merenre) mgbe epithet "red" e debeere naanị ihe ọjọọ chi nke Ijipt arụsị ya bụ, Seth, ajọ ụkpụrụ na ụdị villains na dị nsọ myths nke ndị Ijipt. Agba Seth acha uhie uhie ma anya ya doro anya. Ọ bụ chi nke Hyksos, ndị nwere akpụkpọ anụ na-esonyere chi Belim bụ Bel. Seth mbụ na-anọchite anya a inyinya-ibu na ọdụ, ọ na-tụnyere agwọ Apophis, ụkpụrụ nke ọchịchịrị nọgidere egwu ìhè.
The ngwaa "Desker" pụtara "ịbụ red, ibu red ya" ma "na-emenye ụjọ", "kem" (nwa, nwa enwe) mere ihe niile na-aga na ntụziaka nke eziokwu, ikpe ziri ezi, w itule (na ya bụ, Maat n'asụsụ Ijipt).
A na-ejikwa okwu "kem" (nwa) mee ihe maka eserese ndị na-ahụ anya na ntutu nke ndị Ijipt. Dị ka nna nke Egyptology nke oge a JF Champollion kwuru, sị: "nwa, nke a na-agbapụta na agba agba nke agbụrụ ndị Ijipt".
Negro Nations na Omenala: Site na Negro Antiquity gaa na Nsogbu Ọdịbendị nke Black Africa Taa
15,20€ dị na ngwaahịa
4 dị ọhụrụ site na 15,20 €
Ejiri 5 mee ihe site na 13,89 €
Zụta € 15,20
nke September 18, 2020 11:40 pm
Ụbọchị mwepụta 2000-07-11T00:00:01Z
Edition Mbipụta 4e
Publication Ụbọchị 2000-07-11T00:00:01Z
Isi Iyi: http://www.menaibuc.com